Mahadsanid Trey Pennington | Martech Zone
Axad, Sebtembar 4, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Qaar ka mid ah wararka naxdinta leh ee saaka, maqalka dhimashada lama filaanka ah ee Trey Pennington. Bishii Maarso, Trey iyo Jay waxay i weydiisteen inaan ka muuqdo barnaamijkooda raadiyaha, Furan Ganacsi. Waxay ahayd wada hadal aad u wanaagsan oo ku saabsan sii socoshada caan ku noqoshada qoraalka iyo Trey runti waxay i siisay iftiiminta dhammaan bandhigga. Haddii aad aqriso darbigiisa Facebook, waxaad ogaan doontaa in isxilqaanku uu caadi ku ahaa dhammaan farriimihii ay raaceen asxaabtiisa iyo asxaabtiisa.
Ma aqaano wax faahfaahin ah laakiin waxay u muuqataa in Trey uu naftiisa dilay. Taasi waxay ka dhigeysaa wax naxdin leh. Qaar ka mid ah shabakada Trey waxay dadka ku boorrinayaan inay caawimaad raadsadaan haddii ay leeyihiin fikrado ah inay naftooda dilaan. Dabcan waan jeclaan lahaa, sidoo kale.
Waxaa jira walaac kale oo salka igu haya aniga, in kastoo. Shakhsiga internetka ee Trey wuxuu ahaa mid cajiib ah. Wuxuu si joogto ah u safri jiray oo wuxuu gebi ahaanba ku hawlanaa shabakadiisa. Boggiisa twitter-ka ayaa ah weedho aan dhammaad lahayn oo tweets ah oo dhiirrigeliyey, mahadnaqay oo dhiirrigeliyey kuwa kale. Walaaca aniga ayaa ahaa in shabakadan cajiibka ah ee dadka kuma filna. Sida daahfuran ee aan nahay, wali waxaan kusameynaa shaqsiyaadka khadka tooska ah ee shaqsiyeed ee aan had iyo jeer u dhigmin caqabadaha qadla'aantayada.
Dhaqaaluhu wuu nuugaa hadda. Dadka qaarkiis waxay dhahaan iska indha tir oo sii wad riixitaanka… laakiin waxaan qabaa walaac aad u daran anigoo ah milkiile ganacsi. Waqtiga ay wakaaladaydu aragto guul sii socota, weli waan xujeyneynaa. Halkii aan 100% u geyn lahayn macaamiisheenna, waxaan u aragnaa inaan gelineyno 150% iyaga… mararka qaarkoodna intaas kuma filna - dalabyada ayaa sii socda in la shubo. In kasta oo aan si adag u shaqeyneyno macaamiisheenuna ay korayaan, iyagu iyagoo leh arrimo saameynaya socodka lacagtooda… taasina waa wax had iyo jeer saameyn ku leh kuweenna kor u kaca.
Ku guul warshaddan, waa inaad koraan. Si aad u koraan, waa inaad ku hawlan tahay oo aad si hagar la'aan ah kor ugu qaaddaa midba midka kale. Markay shabakadu sii weynaato, filashooyinka sidoo kale way koraan. Khudbad kasta oo aad jeediso waxay u baahan tahay inay ka fiicnaato tii hore. Buug kasta oo aad qorto waa inuu noqdaa kan ugu iibinta badan. Qoraal kasta oo blog ah waa inuu ku faafaa. Mar kasta oo qof kula soo xiriiro, waa inaad la soo xiriirtaa si la mid ah… haddii kale waxaa laguu arkaa inaad tahay munaafaq ama nooc ka mid ah elitist. Xaqiiqdu waxay tahay, dalabaadka la saaray xirfadlayaasha ku jira warshadani waa kuwo aad u culus.
Waxaan si aad ah u aqriyaa wax ku saabsan qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha warshadaha warbaahinta bulshada oo naftooda jaraya, shaqaaleysiiya shaqaale si ay u kala dhex dhigaan iyaga iyo shabakaddooda isla markaana si toos ah ugu wareejiya codsiyada leh ogeysiisyada aan la heli karin. Saaxiibbaday waxay igula kaftamaan inaan awoodin inay i soo wacaan ama i qabtaan. Qaar ka mid ah dadka fahamka yar ayaa iiga tagaya fariimaha jahwareerka leh, ka dib aniga ayay i dhajistaan, ka dibna ila soo xiriiraan Facebook… ka dib aad ayey u xanaaqsan yihiin inaanan jawaab ka bixin
Horraantii toddobaadkan, waxaan uga tagey taleefankeyga oo birqaya wuuna ruxruxay si aan kala joogsi lahayn iyadoo wicitaan cusub la ii soo diro daqiiqad kasta. Ugu dambeyntii waan damiyay (sida aan badanaa sameeyo). Intii aan shaqeyn jiray dhammaadka usbuuc kasta, hadda waxaan waqti u qaataa saaxiibbaday iyo qoyskeyga - iyadoon loo eegin culeyska shaqada ama farriimaha aan jawaabtooda la helin. Si fudud kuma sii wadi karo socodsiinta ganacsi, fulinta howsha, suuqgeynta ganacsigeyga IYO ka jawaabida codsi kasta oo iga yimaada shabakadeyda. Markii aan u baahanahay waqti, xiriirkii shabakadaydu wuu xumaadaa.
Kama cabanaayo. Kani waa dunida aan doortay in aan korsado oo aan ka dhex shaqeeyo, iyo Waan jeclahay. Waxaan kaliya ka codsanayaa kuwa idinka faa'iideysta shaqada xirfadleyda internetka inay qaataan daqiiqad, mahadsanid… oo aan fahamsanahay inaan sameyneyno sida ugu wanaagsan ee aan awoodno.
Trey Pennington ayaa lahaa afar jeer soo socda ee aan haysto. Waan qiyaasi kari waayey dalabyada isaga saaran. Waxaan rajeynaynay inaan si dhaqso leh Trey uga helno barnaamijkeena raadiyaha si aan ugu mahadnaqo taageeradiisa aniga… Waan ka xumahay inaynaan fursadaas helin. Laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa Trey fursadda uu i siiyay inaan kula xiriiro shabakadiisa. Taasi waa nooca uu ahaa. Waana ku faraxsanahay waqtigeenna khadka tooska ah.
Sep 4, 2011 at 10: 00 PM
Qaboojinta. Wuxuu ka jawaabayay Tweets kaliya 7 saac ka hor. Runtii, qiyamka ku hay aragti ahaan hana ka waaban inaad raadsato caawimaad markii loo baahdo.
Sep 4, 2011 at 10: 08 PM
Si fiican ayaa loo yidhi, waa la buufiyey.
Sep 4, 2011 at 10: 25 PM
Wax ka yar sanad kahor, jameecadeenu waxay weysay saaxiib aad u qaali ah oo isdilay. Waxay ahayd naxdin iyo su'aalo la mid ah kuwii aad ku soo qaadday qoraalkaaga ayaa soo baxay waxaanan ku qasbanaanay inaan abaabulno kal-fadhi latalin murugo leh oo wax looga qabanayo su'aalaha murugsan ee is-dilka iyo niyad-jabka. Wax badan ayaan ka bartay tusaalahan. Maqalka geerida Trey Pennington waxay dib uga falcelisay dareenno xanuun badan iyo su'aalo, in hadda aan ka nabad qab badanahay wixii dhacay.
Waxa aad ku soo qaaddo ee ku saabsan cadaadiska iyo dalabyada ayaa runtii ah qodob wanaagsan. Nafta bini'aadamka waxay ubaahantahay xoogaa nasiino ah mana adkeysan karto xanuun badan.
Fikirkeyga iyo tacsida waxaan u dirayaa qoyska Trey iyo asxaabtiisa. Dhaxalkiisu markasta barako ha u ahaado oo dhammaantood ha laga helo raalli gelin dhow haddii ay suurogal tahay.
Waxaan waayey saaxiib kale oo sidan oo kale ah dhowr sano ka hor waxayna ahayd baraarujin. Waxay sidoo kale iga dhigtay inaan ka fikiro maalmahaas iyo inay wax saameyn ah ku leedahay dhaqankayga. Waan hubaa in dhaxalka Trey uu ku guuleysan doono ilaha cajiibka ah ee dhiirigelinta. Aniguba sidoo kale, waxaan u duceynayaa qoyskiisa iyo asxaabtiisa inta lagu jiro waqtigan aadka u xun.
Sep 4, 2011 at 11: 28 PM
Waxaan hadda ka bartay Trey subaxnimadii iyada oo loo marayo tweets bulshada bulshada ee DC. Aad u murugo badan. Dhimashadiisu waxay hoosta ka xariiqeysaa in dadka ugu xanuunka badan ay inta badan qalloocayaan diiradda naftooda, haddii uu had iyo jeer dhiirrigelin lahaa kuwa kale, sida aad halkan ku muujisay (iyo meelo kale oo aan ka akhriyey.) Waxaan ugu hadlayaa sidii qof murugaysan oo daba-dheer Aad ayey uga fududdahay inaad dadka kale taageerto halkii aad kaalmo weydiisan lahayd. Waa hab fiican (oo runtii macno leh!) Hab lagu dareemo ama xitaa ugu muuqdo mid xoog badan. Waxaanan ku noolahay dhaqan dhaqso u socda oo aan had iyo jeer noo oggolaanaynin waqtiga ama xoogga aan ku gaadhno, sida ku xidhan innaga oo kale.
Waxaan u dareemayaa asxaabtiisa iyo qoyskiisa, iyo isaga. Mid waa inuu ku jiraa xanuun aan la qiyaasi karin si uu u sameeyo doorashada uu noloshiisa ku joojinayo. Waxaan rajaynayaa in kuwa kale ee dhibaatadan la mid ah lagu dhiirrigelin doono inay wax gaaraan.
Niyad jabku waa sida dilaaga khiyaanada badan, Laurie. Aad baad ugu saxantahay caawimada. Xaqiiqdii, waxaan dhihi lahaa mararka qaar farxadda ku jirta caawinta dadka kale waxay inta badan ka caawisaa in dhinac loo riixo carada dadka kale ay ka cabanayaan. Haddii qof uu akhrinayo faallooyinkaas oo uu halgamayo, waxaan hubaa inay rajeynayaan inay gargaar u doontaan. Ma jiraan wax sidaas u rajo beel ah help waxaan heli karnaa caawimaad markalena farxad ayaan heli karnaa.
Qasnadda 'Stephanie Treasure'
Boostada weyn Douglas. Waxaa jira 2 qoddob oo aad tilmaamtay oo aniga welwel ii ahaa:
1) "Sida hufan ee aan nahay, wali waxaan horumarinaa personas khadka tooska ah oo aan had iyo jeer u dhigmin caqabadaha qadkeena." <= Waa run oo dambi ayaa lagu soo oogay. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah inkasta oo aan tan sameeyo, waxaan illoobaa in kuwa kale ay u badan yihiin iyaguna. Marka markaad fiiriso Facebook-ga oo aad aragto cusbooneysiinta xaaladda ee asxaabta ee ku saabsan dhammaan guulaha ay la kulmayaan, dhammaan 'baashaalka' ay hayaan, waxay iga dhigeysaa inaan sii dareemo xitaa niyad jab iyo caajis badan, lol.
2) "Saaxiibbaday waxay igula kaftamaan inaan awoodin inay i soo wacaan ama ay i qabtaan." <= Tan ayaan isku fahmay. Xitaa markay tahay ka jawaabista weydiimaha shabakaddaada. Runtu waxay tahay in lahadlida asxaabta inta lagu jiro maalinta shaqada iyo kajawaabida su'aalaha qaarkood, ma ahan waxqabad dakhli abuuraya. Markay u timaadana, runti waa inaad ilaalisaa waqtigaaga iyo haa, qor shaqaaleeyaha albaabka si ay ula qabsadaan una kala saaraan weydiimaha u baahan dareenkaaga isla markiiba iyo kuwa aan u baahnayn. Waxaan si tartiib tartiib ah u xakameynayay wicitaanada soo galaya dhawaanahan waxayna umuuqdaan kuwo qallafsan laakiin waa wax ay tahay inaan sameeyo, solopreneur ahaan si aan u kordhiyo waqtigeyga oo aan guriga u keeno hilibka doofaarka.
Xaqiiqdii waan ka xumahay inaad maqasho Trey Pennington in kastoo. Aan aqoon u lahayn shaqadiisa. Dhamaan qoraalada aan aqrinayo, wuxuu umuuqday inuu ahaa nin weyn oo wax weyn kusoo kordhiyay warbaahinta bulshada iyo warshadaha suuqgeynta.
Kuwani waa qodobbo waaweyn, Stephanie. Waxay iga dhigaysaa inaan la yaabanahay sida qiimaha leh shabakadahaani mararka qaarkood. 🙂 Waan ku faraxsanahay inaad tayda kujirtid! Ha ka waaban inaad la soo xiriirto markaad u baahan tahay inaad i soo qaadato!
Sep 5, 2011 at 2: 35 PM
Qoraal aad uqurux badan oo xamaasad leh oo runtii aniga ila hadlaya. Sida qof bilawday hay'ad u gaar ah kadib markii ay musalafday shaqaalahaygii hore (dhisida guriga) iyo hay'addii hore ee fulintaba, waan ogahay isla cadaadiskaas
Waxaan la halgamay naftayda marar badan anigoo isku dayaya inaan naftayda siiyo qiil si aan u qaato maalin fasax ah; in la shaqeeyo wax ka yar 13 saacadood maalin kasta, in laga qaado shayga 50-aad ee "bilaash ah" ee uu macmiilku codsaday iyo in la kobciyo ganacsigeenna. Waxaan ku soo kornay hoos u dhaca dhaqaalaha waxaanan leenahay macaamiil cajaa'ib leh, laakiin wali, dalabaadka waa sida saxda ah ee aad soo bandhigtay.
Douglas wuxuu ahaa mid saaxiib layaableh. Laba qof oo marti sharaf ah ayaan ku lahaa sanadkii hore, si naxariis badan ayuu u ahaa waxay ahayd markii iigu horaysay ee aan si toos ah u baahiyo meel fog waxaanan dareemay in aan ku qaylinayo oo kaliya in aan naftayda maqlo.
Waxaan ku raacsanahay filashada dadka inay u baahan yihiin in dib loo waco darajo sare.
Ilaa iyo inta dadku ka dhahayaan shaqsiyadeena internetka kuma habboona khadkeena khadka tooska ah waan diidanahay. Trey wuxuu ahaa qof siinta qof ahaanta sidoo kale. Annagu haddaan nahay dadweyne / shaqsiyaad diyaar uma nihin inaan nolosheena qaaska ah ku soo bandhigno qadka. Maxay tahay sababta aan u noqoneyno qof shaqadiisa.
Marka maxaad naga rabi laheyd inaan wadaagno xiriirka bulshada?
Waxa aan doorto inaan ka qaato tan waa "Sideen ula mid noqon doonaa kuwa kale sababa la xiriira xiriirkeyga aan la leeyahay Trey?"
Waxaan sii wadi doonaa inaan noqdo hogaamiye waxaanan sii wadi doonaa inaan lahaado shabakad aan ku kalsoonahay si gaar ah waqtiyada aan u baahdo.
Jacaylkeyga iyo ducooyinkeygu waxay utagaan caruurta Trey sidaan ogahay ho waxyeello waxay ahayd markii waalidkay isfureen 25 sano kadib guurkooda, waxaan qiyaasi karaa oo keliya sida ay u xanuun badan tahay inuu mid dilo furiin dartiis.
Sep 5, 2011 at 2: 50 PM
Waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan, Michele. Waan ku raacsanahay inaanan rabin dadka yaqaan meheraddayda gaarka ah. Dhanka kale, in kastoo, dadka raacsan ay u baahan yihiin inay ogaadaan goorta kuwa ay raacayaan ay leeyihiin caqabado badan oo isku mid ah (mid guud iyo mid gaar ah). Ma jiraan wax la yiraahdo superman ama superwoman waxaana u maleynayaa inaan u baahanahay inaan dib u garaacno shaqsiyaadkaan qumman - ama haddii kale si fudud ayaan dhamaanteen been uga wada sheekaysanaynaa 'daahfurnaan', miyaanay ahayn?
Asxaabta iyo qoyska Trey waxay kujiraan baryadayda - waa maxay masiibo, naxdin xun.
Sep 5, 2011 at 7: 35 PM
Dhibic weyn Doug! Waxaan haystaa halganno badan oo isku mid ah. Had iyo jeer waxaa la ii sheegaa inaan u baahanahay inaan wax badan ka sameeyo khadka tooska ah, laakiin maalmaha badan baan mashquul ku ahay uun si aan u helo macmiilkayga shaqadiisa. Iskuday sida aan awoodno, qofna kuma fiicna markaa meesha aad hal meel uga ifto, waxaad u badan tahay inaad cillado ku leedahay dadka kale. Waa wax laga xumaado waxa ku dhacay Trey. Nolosheena qofeed ee shaqsiyadeed ayaa aad uga muhiimsan shabakadeena fidsan, markii aasaaska uu ruxana waxay si fudud u dareemi kartaa inay dhamaantiis burburayaan. Barakada adiga! Waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan qoyskii iyo asxaabtii Trey.